Zimbabwe Inoti Iri Kuongorora Mhando Itsva yeNhomba yeCovid-19
Zimbabwe iri kuita ongororo yekutsvaga nhomba yekudzivirira Covid-19 inoenderana nevanhu vemuZimbabwe pamweneveAfrica. Ongororo iri iyi kutungamirirwa nerimwe boka remuZimbabwe, reCharles River Medical Group (CRMG) richishanda nemamwe mapazi ehurumende.
Mukuru weCRMG, Dr Tariro Makadzange, vati nhomba yavari kuongorora pasi pechirongwa chavo cheZimcovax yakagadzirwa neSerum Institute yeIndia.
Dr Makadzange vati aka ndekekutanga ongororo yakadai ichiitwa munyika.
Vati kunyange hazvo nhomba dziri kushandiswa pari zvino dziri kushanda, ongororo yavo ine chinangwa chekuuya nenhomba yakasimba kudarika dziripo.
Dr Makadzange vati nhomba yavari kuongorora yakagadzirwa pachishandiswa homba yeHepatitis B iyo inobayiwa vanhu vari vadiki.
Mumwe ari kushanda naDr Makadzange pachirongwa ichi, Dr Admire Hlupeni, vati apo nhomba dziri kushandiswa pari zvino dzakanangana nemhando imwe chete yeCovid-19, nhomba yavari kuongorora ichange yakanangana nemhando mbiri uye inogona kusimbaradzwa mukati menguva diki kuti irwisane nedzimwe mhando dzakaita seOmicron.
Dr Hlupeni vati ongororo yavo ichiri pachinhano chekutanga uye ichaenderera mberi chete kana zvichinge zvaonekwa kuti haikuvadzi vanhu.
Vati vari kushanda nemasangano akaita se Medical Research Council of Zimbabwe, Medicines Control Authority of Zimbabwe neResearch Council of Zimbabwe uye masangano aya ese ari matatu akagutsikana netsvakurudzo yavo.
Dr Makadzange vati kana tsvakirirdzo yavo ikaratidza kuti inokwanisa kudzivirira vanhu kubva kuCovid-19, ichange iine mutengo wepasi kudarika nhomba dzese dziri kushandiswa pari zvino.
Dr Hlupeni vatiwo kunze kwekuva nemutengo uri pasi nhomba yavari kuongorora iyi ine zvimwe zvakawanda zvayakanikra zvakaita sekuti haidi mafiriji anotonhora zvakanyanya.
Vanotiwo chinofadza ndechekuti pane imwe ongororo yakaita seyavari kuita iri kuitwa kuAustralia uye iri kufamba zvakanaka chose.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuMedicnes Control Authority of Zimbabwe sezvo mukuru weboka iri, VaRichard Rukwata, vati vashandi vanoona nezvenyaya idzi muboka ravo vange vasiri pabasa nhasi.
Hatinawo kukwanisa kubata mukuru anoona nezveCovid-19 munyika, Dr Agnes Mahomva, sezvo vanzi vange vari mumusangano.
Pane nhomba sere dzakabvumidzwa kushandiswa ne World Health Organisation dzave kushandiswa pasi rese uye Zimbabwe inonyanyoshandisa Sinopham neSinovac dzekuChina.
Dzimwewo nhomba dzinoshandiswa muZimbabwe dzinosanganisira Covaxin yekuIndia, Sputinik yekuRussia pamwe neJohnson & Johnson yekuAmerica.
Zvichakadai, bazi rezvehutano rakazivisanezurokuti vanhu gumi nevasere vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro uye vanhu zviuru zviviri nemazana maviri nemakumi masere nevatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare.
Kusvika pari zvino vanhu zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezvishanu nemakumi manomwe nevapfumbamwe kana kuti 195 079 vabatwa neCovid-19, uye vanhu zviuru zvina nemazana masere nevashanu kana kuti 4 805 vakashaya nedenda iri.
Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava mamiriyoni mana nezviuru makumi matanhatu nemakumi mana nevatanhatu, 4 060 046.
Vanh vabayiwa nhomba yechipiri vava mamiriyonimatatu nezviuru makumi manomwe nezvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevasere, 3 074 698.
Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu mamiryoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwedenda reCovid-19.